I-Mad Scientist Lab Izikhokelo zePizzy Potion
ULab Scientist Lab
Oososayensi baseMad abaziwa ngamanzi okupompoza. Usosayensi onobudenge ufuna i-fizz! Ezi ntlupheko kunye ne-fizzes kwaye ziyafumaneka kumbala we-classic omsakazo okanye uhlobo oluthile lokutshintsha umbala. Ibukeka bububi kunye nobubi, kodwa i-pozzi ye-fizzy iphephile ngokwaneleyo ukusela kunye nokuthanda ukunconywa ngaphezu kweziphuzo ezininzi.
Hlanganisa i-Fizzy Potion Ingredients
Okokuqala, makhe sihlanganise i-posi fizzy potion.
Phala amanzi ambalwa kunye ne-baking soda kwisiglasi sakho. Yongeza umbala wokutya ukuze uthole umbala ocolileyo.
Xa ulungele ukutshaya, yongeza i-splash yeviniga.
Unokongeza iviniga, i-baking soda, kunye nombala wokutya ukuze kugcinwe izinto. Ungayiphuza le potion, kodwa iya kunambitha njengeviniga yerari (ick). Le potion ingakwazi ukuqhubeka igubungela ixesha elide (njengoko ubona kule vidiyo).
Yenza i-Potion Magic i-Taste Better and Foam Longer
Ayikwazi ukuma ukunambitha kwe-baking soda kunye neviniga? Faka inani elincinci lokutya i-soda ibe yiphunga lesithelo. Yongeza i-splash yeviniga ukuze uqalise i-fizz. Iiguntshi azigcini nje ngeyona nto ingcono, kodwa iyakwazi ukugcina ixesha elide. Ijusi ye-Beet ibonakala iphovu ngokukodwa (nangona i-flavour ingabonakaliyo).
Yenza i-Potion Shintsha Umbala
Ukuba uthe wasebenzisa ijusi yesithelo, ngaba i-potion yakho yatshintsha umbala xa ungeze iviniga?
Iimvuno ezininzi zeziqhamo (umzekelo, i juisi yamagilebhisi) zibonakaliso zendalo ze-pH kwaye ziya kuphendula kwishintsho se-potion kwi-acidity ngokujika imibala. Ngokuqhelekileyo, utshintsho lombala alubi kakhulu (obomvu obomvu), kodwa ukuba usebenzisa ijusi ebomvu , i-potion yakho iya kutshintsha ukusuka eluhlaza okwesibhakabhaka ukuze uhlambuluke.
Ukuphendula kwamakhemikhali phakathi kwe-baking soda kunye neviniga kuvelisa i- bubbles ye-carbon dioxide gas njengenxalenye yale mpendulo ye-acid-base:
i-baking soda (i-sodium bicarbonate) + iviniga (i-acetic acid) -> i-carbon dioxide + amanzi + i-ionidi ion + i-acetate ion
I-NAHCO 3 (s) + CH 3 COOH (l) -> CO 2 (g) + H 2 O (l) + Na + (aq) + CH 3 I- COO - (aq)
apho = liqinile, l = i-liquid, g = i-gas, aq = inqueous okanye isisombululo
CH 3 COOH <-> H + (aq) + CH 3 I- COO - (aq)
H + + HCO 3 - <-> H 2 CO 3 (carbonic acid)
I-Acetic acid (i- asidi ebuthakathaka ) iphendula kunye kwaye iyanqande i- sodium bicarbonate (isiseko). I-Carbon dioxide ijongene nokugqithisa kunye nokuqhaqhazela kwesi sihloko. Kwakhona negesi eyenza iibhobho ezinxilweni ze-carbonate, njenge-sodas.
Ukupheka kweBhomu yeBhomu
Khanyisa kwi-Dark Crystal Geode
Yenza iibhotile ezininzi kunye namaProst Patterns
Lipids - Inkcazo kunye nemizekelo
Uluhlu lweziganeko zamaPapa amaKatolika (32 CE-1003 CE)
Ziziphi ii-Ternary (Conditional) Abasebenzisi kwiRuby?
Indlela iPapasho YokuSasazeka Yenziwa Ngomdlalo Wokugembula
Iimfazwe zeMfazwe eziPhambili kunye eziMbi kakhulu ngeeNqanawa
Imifanekiso yezolonwabo yezombusazwe
Indlela Yokuthi Ndiyakuthanda ngesiFrentshi
9 Iimidlalo eziMaqambi ze-Anime Series Series Worth Watching
Izihlomelo zesiJamani: Erst no Nur
Yintoni eyahlukileyo phakathi kokufundisa kwizikolo zikaRhulumente kunye nezikolo ezizimeleyo?
Ngubani Ubona Ngokwenene Uluntu kunye neGunya loRhulumente?